Kutyaira kunogona kuve kunotyisa kurovedza muviri, heano mana matanho ekudzivirira kusagadzikana - Tamban RELAY
By bryamangwanabe On Juil 27, 2020
Kutyaira kunogona kutyisa uye kutonyanya kunyanya paunenge uchangotanga kudzidza. Heano mana matipi ekunetseka panguva yekutyaira!
Kudzidza kutyaira kunokurudzira chaicho, sezvo iwe unogona kunge uchizvifungidzira iwe pachako uchityaira nebvudzi rako mumhepo kushanyira shamwari dzako. Chiratidzo chechokwadi cherusununguko sezvatinonzwa chekuti zvipingaidzo zvave chikamu chekare. Zvine kusuwa, kuti uwane rezinesi, iwe unofanirwa kupfuura chikamu chakaoma chekutyaira maawa. Kana kune vamwe, ichi chinongova chimiro chakagadziriswa nekukurumidza, kune vamwe itiro chairo chipingamupinyi chinotanga sezvo kushushikana kwavo kuchideredza kudzidza kwavo kusvika pakuvadzvinyirira. Kana paine maitiro ekuisa zvinhu muchiona panguva yekunetseka kurwiswa, heano mana matanho ekuti-kusagadzikana panguva yekutyaira maawa.
Edza kururamisa zvikanganiso zvako zvisati zvaitika
Chikwereti: Art Makaiv kuburikidza neInsplash
Kunetseka kazhinji hakugone kudzoreka, asi kazhinji kunogona kudzorwa zvakanyanya paunogona kuzvisimbisa iwe pachako. Kana iwe ukaona kuti iwe unonetsekana nekupokana nechero, semuenzaniso, edza kudzidza maitiro kuburikidza nevhidhiyo paYouTube. Chokwadi, varairidzi vese havana nzira imwecheteyo uye pamwe uchakwanisa kunzwisisa zviri nani nekudzidza zvakasiyana. Edza kurwisa kutya kwako nemoto nekutarisana nazvo mufungo usati waisa muitiro. Nerombo rakanaka, kuve nemirairo mupfungwa kunokubvumidza kudzikama uye kusvika pachirongwa nekunyarara.
Taurirana nemudzidzisi wako
Zviri nyore kutaurwa pane kuzviita, asi ndiyo hwaro hwekubudirira kudzidza. Kana iwe uchinzwa kuti nzira inoshandiswa nemudzidzisi wako haina kukodzera, usazeza kumuudza. Iye / iye aripo nekuda kweizvozvo. Kupfuura zvese, kudzidza kutyaira kuri kure nekure uye ndosaka iwe uchifanira kuzvishingirira pachako.. Zvakajairika kuti uve nematambudziko uye ibasa remudzidzisi wako kuti ubatsire kuzvivimba. Pamusoro pazvo, kana ikozvino kusingafambi zvachose, kumbira kuti uchinje murayiridzi nekukutaura iwe zvakananga kuchikoro chako kwekutyaira. Zviri nani kubvunza pane kutambisa nguva!
Chikwereti: Easton Oliver kuburikidza neUsplash
Iyi ndiyo mhinduro inogona kugadzirisa matambudziko ako ese! Kana iwe uchinzwa kuti haukwanisi kuenda kumberi nemurairidzi uye iwe unonetsekana zvekuti unenge wave kuda kukanda mapfumo pasi, funga kuroja mota yekumeso maviri. Kutanga, mutengo unofadza kwazvo wobva waityaira nemunhu waunoda uchaita kuti uve wakasununguka uye pamwe ungatozvivimba. Chokwadi, sezvaachakuziva chaizvo, uchagona kubvunza mibvunzo wakasununguka uye kunzwa uchiteererwa. Chinhu chakakosha!
Chekupedzisira, usazeza kudzokorora pachako kuti unokwanisa pazviri kunyangwe kusava nechokwadi kwako uye kusagadzikana kwako. Zviudze pachako kuti iwe uchakunda kusagadzikana kwako uye kuti iwe wakanyanya kunaka. Zvinganzwika sezvisina musoro kutaura sekudaro asi nekuzvidzokorora kwauri, zvichazoguma zvaita mutsauko usingazive. Tora maminetsi mashoma pasati pechikamu chimwe nechimwe kuti uzvitarise pachako mugirazi uye zviudze pachako kuti unogona kuzviita uye kuti unokwanisa kuzvinatsa pachako asi zvakare pamusoro pezvose kuti une kodzero yekukanganisa nekuti uchiri mudzidzi. Paunenge uchimirira kukunda kutya kwako.
Ichi chinyorwa chakatanga kuoneka pa: https://trendy.letudiant.fr/permis-4-tips-pour-eviter-de-stresser-pendant-les-heures-de-conduite-a4896.html
Kutyaira kunogona kutyisa kwazvoheano mana matanho ekudzivirira kusagadzikana
Heano edu matipi ekutanga pabasa rako idzva.